How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 (using Sn0wbreeze) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Smarth Stay EX(Do Not Buy)-V.1.0.4 For Android(642Kb) Smarth Stay EX(Do Not Buy)-v.1.0.4 For Android(642Kb) Coin Dozer v 5.9(latest version)for android Conferendo videochat for android Mobile ဖုန်းသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ်ကျဆင်းနေ Home
Published On: Fri, Feb 22nd, 2013 iOS Jailbreak Tool / iOS jailbreak tutorials / iOS tutorials | By Nicky Paing How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 (using Sn0wbreeze)
ကဲ..အခုပြောမယ့်နည်းလေးက iPhone တွေအကုန်လုံးကို Support လုပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော့်iPhone4 မှာစမ်းသပ်ကြည့်သလောက်တော့အင်မတန်လွယ်ကူပြီး အောင်မြင်စွာ Jailbreak လုပ်နိုင်၊ Activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ကဲ…စကြရအောင်…ဒါကဒုတိယနည်းလေးပေါ့ဗျာ Download sn0wbreezedl-master
Download iOS 6.1.2 IPSW (ရှိပြီးသားဆိုရင်မဒေါင်းနဲ့တော့နော်…)
၁။ sn0wbreezedl-master.zip ကိုဇစ်ဖြည်လိုက်ပါ။sn0wbreeze-v2.9.10 ကို Administrator Mode ဖြင့် Run ပါ။Antivirus ရှိပါက ခဏပိတ်ထားပါ။
၂။ Welcome screen မှာ Ok ကိုနှိပ်ပါ။မြှားအပြာလေးကိုဆက်နှိပ်ပါ။Browse For an IPSW နေရာကိုနှိပ်ပြီး Download ဆွဲထားသော iOS 6.1.2 IPSW ကိုရွေးပေးပါ။မြှားပြာလေးကိုဆက်နှိပ်ပါ။
၃။ Expert Mode ကိုနှိပ်ပါ။General ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။မြှားပြာလေးဆက်နှိပ်ပါ။Activate The iPhone[Hacktivate) နေရာမှာအမှန်ခြစ်ပါ။မြှားပြာလေးကိုဆက်နှိပ်ပါ။နောက်တစ်ချက်ဆက်နှိပ်ပါ။အောက်ဖက်နားက Build IPSW ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ Sn0wbreeze ကနေ Custom IPSW တစ်ခုထုတ်နေပါပြီ။နဲနဲတော့ကြာတတ်ပါတယ်။စိတ်ရှည်ပါ။Custom IPSW ထုတ်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါ ok နှိပ်လိုက်ပါ။(ထုတ်လိုက်သော Custom IPSW သည် Desktop ပေါ်တွင်ရောက်နေပါမည်။ဥပမာ-sn0wbreeze_iPhone_4-GSM-6.1.2-10B146)
၅။ သင့်ဖုန်းကို USB ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ပါဝါပိတ်လိုက်ပါ။ပြီးလျှင် Start ကိုနှိပ်ပြီး ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးပါ။အောင်မြင်ပါက အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
၆။ iTunes ကိုဖွင့်ပါ။Recovery mode ဖြင့် iphone တစ်ခုတွေ့ကြောင်းပေါ်လာမည်။ok လုပ်လိုက်ပါ။ Shift ကီးကိုဖိပြီး Restore ကိုကလစ်လုပ်ပါ။စောစောက ထုတ်ထားသော Custom IPSW ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။iTunes မှဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
၇။ Restore လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားပါက Evasi0n icon အကြီးဖြင့် တက်လာပြီး Reboot ပြန်ကျသွားပါလိမ့်မည်။ဖုန်းပြန်တက်လာပါက Cydia>>User ရွေးပေးပြီး Untethered Jailbreak ကိုစတင်သုံးဆွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဂုဏ်ယူပါတယ်မိတ်ဆွေ…သင့်ဖုန်းကို Sim Card မလိုပဲ Jailbreak & Activate လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပါခင်ဗျာ။ NickyPaing(MMAS).
Nicky Paing - Related News
ကျနော်မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ Go locker Theme လေးပါ
23 comments on “How to Jailbreak and Activate Without Sim Card in iOS 6.1.2 (using Sn0wbreeze)”	zaw htet on February 27, 2013 at 2:54 pm said:
jail break icon paw ma lar loh bar lote ya ma lal so tr ta chat pyaw pay par ios 6:1 par
Reply ↓	zarni on February 28, 2013 at 12:43 pm said:
ကျွန်တော်က ခုမှ iphone သုံးဖူးတာပါ။ 6.1 ကမကောင်းဘူးဆို လို့ဒီပို့စ်အတိုင်းလုပ်လိုက်ပါတယ်။ တင်ပြီးတော့ no service ဖြစ်နေတယ်အစ်ကို။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ လေးပြောပြပေးပါခင်ဗျာ…..
Reply ↓	Zaw Myo on March 3, 2013 at 8:50 am said:
Jailbreak လုပ်ပြီးတော့ Phone Line က ‘No Service’ ဖြစ်သွားတယ်။
Setting ထဲဝင်ကြည့်တော့ Carrier တို့ Personal Hotspot တို့ ပေါ်မလာတော့ဘူး
Reply ↓	khant gyii on March 4, 2013 at 12:12 pm said:
Lock အလုံးတွေ ဆိုရင်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ဒါပေမဲ့ iPad baseband ဆင်းကြည့်ပါ .. ရတဲ့ အထိ ဆင်းကြည့်ပါ ..ဒါဆိုရင်တော့ လိုင်းတက်နိုင်ပါတယ် …. (Try Yourself)
Reply ↓	how how on March 10, 2013 at 5:43 pm said:
6.1 ka har kaw tin pay par lar.
Reply ↓	myokyaw on March 16, 2013 at 2:44 pm said:
လုပ်ပါဦးဗျာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်အကိုနည်းအတိုင်းလုပ်တာ ဒါပေမဲ့ no service ဖြစ်နေတယ်
Reply ↓	San min hlaing on March 21, 2013 at 7:02 pm said:
ကျနော် iPad က စပီကာနဲ့သီးချင်ဖွင့်လိုက်တာ အခုအသံမထွက်တောဘူးဖြစ်နေတယ်
Reply ↓	sai tan lwin on March 23, 2013 at 6:31 am said:
ဗားရှင်း 6.1.3 အတွက်ကော အဆင်ပြေမလား
Reply ↓	ah soee on March 25, 2013 at 1:36 pm said:
hi bro , iphone 4s မှာ လုပ် လို့ မရဘူး ။ ဘယ် software ဘယ်လို နည်းနဲ လုပ်ရ မယ် ဆိုတာ သိရင် ကူညီပါဦး ။ ကျေးဇူးပါ
Reply ↓	Wai Yan on May 15, 2013 at 3:14 pm said:
iphone4s and5are not supporting fri.and lock phone are not to try!
Reply ↓	wanna on March 27, 2013 at 11:42 am said:
Reply ↓	yelinnhtoo on March 29, 2013 at 3:10 pm said:
ipad3အတွက် 6.1.3 Jailbreak မစပါ
Reply ↓	Ngwe Thazin on April 14, 2013 at 3:26 pm said:
Reply ↓	thargyi on April 15, 2013 at 1:42 am said:
အစ်ကို ကျွန်တော့ဖုန်းက Iphone4ပါ number lock ချထားတာ နံပါတ်မေ့သွားလို့ ဘယ်လိုပြန်လုပ်လို့ရမလဲ မသိဘူး… ကျွန်တော့ကို ချက်ခြင်း အကြောင်းပြန်ပေးပါအုံး… ကျွန်တော့ညီသုံးတဲ့ဖုန်း ပေးထားခဲ့တာ မေ့သွားလို့.. သိတဲ့သူများလည်း ပြောပေးကြပါအုံး
Reply ↓	zinminhtet on April 16, 2013 at 3:05 pm said:
i ka i phone ko passcode kan htar tar pass ko forgot twar tal aye dar bal loe loat ya ma lye help me please reply me Reply ↓	Kyaw kyaw on April 23, 2013 at 7:27 am said:
အကိုရေ jbဖောက်မလို့ တော်တော်လေး စဉ်စားနေရတယ် အောက်မှာ မေးထားတာတွေကြီးဘဲ ဘယ်လို့ဖောက်ရမှာလဲ အကို ကျွန်တော်စက်မှာ ဗားရှင်းကို အရင်မြင့်ရမှာလား ကွန်ပြူတာက နေတခါတဲမြင့်ရမှာလား
Reply ↓	Hseng Main on April 26, 2013 at 2:49 pm said:
ကွန်ပျူတာကနေတစ်ခါတည်းမလုပ်ပါ နဲ့ တော်ကြာမီးပျက်သွားရင်ပိုဆိုးနေအုံးမယ် Reply ↓	zero on April 27, 2013 at 3:38 pm said:
6.0 ကိုလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် ကြိုးစားပေးပါ bro တို့
Reply ↓	san win on April 29, 2013 at 11:16 am said:
i can’t open my cydia how to do same myanmar font
Reply ↓	kaung myat on May 3, 2013 at 7:14 am said:
အကိုပြောတဲ့ အဆင့် အကုန်လုံးရပါတယ်။ နောက်ဆုံး itune နဲ့ Restore လုပ်လိုက်တော့မှ error code 3194 တက်လာလို့ပါ။ ကူညီပါအုန်းခင်ဗျ
Reply ↓	tk nyunt on May 10, 2013 at 10:28 am said:
Iphone5v.6.1.3 ကို ရန်ကုန်မြို့လူကြီးမင်းဆိုင်မှာ မြန်မာဖောင့် သွင်းရလို့ အရမ်းဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်။ တနေ့ တော့ ကျွန်တော် လက်ဆော့ပြီး restore လုပ်လိုက်တာ အကုန်ပျောက်ကုန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲခင်ဗျာ။ ယခု နိုင်ငံခြားမှာဖြစ်နေလို့ကူညီပါအုံး။
Reply ↓	sang on May 10, 2013 at 7:57 pm said:
Iphone 4s ios6.1.3ကို AT&T Sim card ဟုတ်ဘဲဘယ်လို Activate လုပ်ရမလဲ
Reply ↓	nantawwinn on May 11, 2013 at 1:51 am said:
iPhone5 iOS6.1.3 jailbreak ရရင်တင်ပေးပါဦးနော်
htetmtic on Furby v1.0.8 for iPhone/Pad/Pod touchJu Ju on SRS Root -One Click Root tool (Support Android version 1.5 to 4.2)hireku on FL Studio Mobile V1.0.5 Apk+OBB-(123Mb)shwethwar on Conferendo videochat for androidTIDUS on Iron Man3– The Official Game V1.0.4 -Apk+Data(593Mb)(Unlimited Money & Full Armor) Android Development